China SS Lug Lug Butterfly Valve Kugadzira uye Fekitori | Hongbang
1 MUVIRI CF8 / CF8M 1
KUEDZA KUFANANA SS304 / SS316 CHISIMBISO
Gadzira zvinoenderana nezvinodiwa neEuropean rairo 2014/68 / EU «Zvishandiso zviri pasi pekumanikidzwa»: modulate H. Kutarisana kumeso maererano nematanho NF EN 558 serie 20, ISO 5752 série 20, DIN 3202.
Zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa zvakanyanya uye zvinovimbwa nevashandisi uye zvinogona kusangana zvichiramba zvichivandudza zvido zvehupfumi nezvehupfumi. Tinogamuchira vatengi vatsva nevakuru kubva kumafambiro ese ehupenyu kuti vatibate kuitira ramangwana bhizinesi hukama uye kubudirira mukuwirirana!
Tiri pachokwadi kutarisira kushandira pamwe nevatengi pasi rese. Tinotenda tinogona kukugutsa iwe nemhando yepamusoro zvigadzirwa uye nebasa rakakwana. Isu tinogamuchira neushamwari vatengi kuti vashanyire kambani yedu nekutenga zvigadzirwa zvedu.
Pashure: UPVC Butterfly Valve
Zvadaro: SS chitete Butterfly Valve